KỌMPUTA NGWANRỌ VIDIO - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2020
Ihe ngosi bụ nchịkọta ihe ndị e kere iji kpughee ozi ọ bụla na ndị na-ege ntị. Ndị a bụ tumadi ngwaahịa nkwalite ma ọ bụ ihe mmụta. Iji mepụta ngosi, e nwere ọtụtụ ihe omume dị iche iche na Intanet. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ n'ime ha dị nnọọ mgbagwoju anya ma gbanwee usoro ahụ dị ka ọrụ oge.
Nzuzo bụ ọrụ maka ịmepụta ihe ngosi nke ga-enye gị ohere ịmepụta ngwaahịa bara uru ozugbo enwere ike. Ndị ọrụ nwekwara ike ibudata ngwa pụrụ iche na kọmputa ha, mana nhọrọ a dị naanị maka nkwụnye ụgwọ. Ọrụ enweghị ike ọ bụ naanị na Ịntanetị, ọrụ ọ bụla e kere eke dịịrị onye ọ bụla, faịlụ ahụ ga-echekwa na igwe ojii. Enwere ihe mgbochi na olu. Ka anyị lee ihe ngosi ị nwere ike ịmepụta n'efu.
Ikike ịrụ ọrụ n'ịntanetị
Usoro ihe omume Prezy nwere ụzọ abụọ eji arụ ọrụ. Online ma ọ bụ jiri ngwa pụrụ iche na kọmputa. Nke a dị mfe ma ọ bụrụ na ịnweghị ịwụnye mgbakwunye ngwanrọ. Na mbipute ikpe ị nwere ike iji nchịkọta akụkọ online.
N'ihi ngwá ọrụ a na-egosipụta mgbe mbụ ị na-eji usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịmatakwu ngwaahịa ahụ ngwa ngwa ma malite ịmepụta ihe ndị dị mgbagwoju anya.
Na akaụntụ onwe onye, ​​onye ọrụ ahụ nwere ike ịhọrọ template kwesịrị ekwesị maka onwe ya ma ọ bụ malite ọrụ site na ọkọ.
Ịnwere ike ịgbakwunye ihe dị iche na ihe ngosi gị: Foto, vidiyo, ederede, egwu. Ị nwere ike ịtinye ha site na ịhọrọ ihe ndị a chọrọ site na kọmputa ma ọ bụ site na ịdọkpụ. A na-edezi aha ha ngwa ngwa na ndị na-edezi obere.
Ị nwere ike itinye mmetụta dị iche iche na ihe ndị agbakwunyere, dịka ọmụmaatụ, gbakwunye okpokolo agba, mgbanwe agba agba.
Okpokoro bụ ebe pụrụ iche nke dị mkpa iji kewaa akụkụ nke ngosi ahụ, ma anya ma na uzo. Ọnụ ọgụgụ ha na usoro ihe a abụghị nanị.
Ọ dịkwa mfe ịgbanwe ebe a ebe a. Nke a nwere ike ịbụ ma ọ bụrụ na foto ejiri agba agba ma ọ bụ ihe oyiyi ebudatara na kọmputa.
Gbanwee atụmatụ agba
Iji meziwanye ngosi nke okwu gị, ị nwere ike ịhọrọ atụmatụ agba site na nchịkọta ahụ wuru ma dezie ya.
Akụkụ kachasị mkpa nke nkwupụta ọ bụla bụ ihe ngosi. Na mmemme a, ị nwere ike ịmepụta mmetụta dị iche iche nke ije, mbugharị, ntụgharị. Isi ihe ebe a abụghị ka ọ ghara imebi ya, nke mere na mmegharị ahụ adịghị ele chaotic anya ma ghara ịdọpụ uche ndị na-ege ntị site na isi echiche nke ọrụ ahụ.
Ịrụ ọrụ a na-adọrọ mmasị ma dị mfe. Ọ bụrụ na n'ọdịnihu, m ga-emerịrị ihe ngosi dị mma, mgbe ahụ, m ga-eji Prezi. Ọzọkwa, nsụgharị nnwere onwe zuru ezu maka nke a.
Ọnụnọ onye na-emepụta ihe n'efu;
Igwe okwu Bekee.